အိမ်သုံးပစ္စည်းများ - ဒယ်နီအကြော်အိုး Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ်သုံးပစ္စည်းများ classified: အသစ် ဒယ်နီအကြော်အိုး
ကိုရီးယား ဘက်စုံသုံး ဒယ်နီအကြော်အိုး ရောင်းကောင်းတဲ့အိုးနီလေးပစ္စည်းပြန်၀င်ပီနော် 😉😍😘 ဒယ်နီအကြော်အိုး- 15000 ကျပ် ဟင်းကြော် / ချက် / ကင် / ပြုတ် အားလုံး ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကြော်အိုး လေးပါရှင့်! တမျိုးထဲ ဝယ်ပြီး မိသားစု အကင်ကင်စားလဲ ရတယ် ဟော့ပေါ့ ချက်စား ရင်လဲ ရတယ် အမျိုးမျိုး အသုံးဝင်တယ်လို့ အခုပဲအိမ်မှာဆောင်ထားလိုက်တော့နော် 😍😍😘 မှတ်ချက်- ဟင်းကြော်ချက် ရာတွင် ဟင်းကြော်ဇွန်းကို ကော်ဇွန်း သုံးလျှင် ပိုကောင်းမည်, အိုးဆေး ရာတွင် သံ, စတီး ဖတ် နဲ့ မဆေး ရပါ, ရိုးရိုး အစိမ်းဖတ် သုံးရင်လဲရပါတယ်ရှင့်! 🙂😍 09779975467 ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ရှင့်။